धर्मशास्त्र भन्छ, हिन्दु धर्ममा ह'वन लगाउंदा 'स्वा-हा' भन्नुको अर्थ भगवानको आ'र'धना - Filmy News Portal Of Nepal
‘धर्मशास्त्र भन्छ, हिन्दु धर्ममा ह’वन लगाउंदा ‘स्वा-हा’ भन्नुको अर्थ भगवानको आ’र’धना’
स्वा-हाको महत्व हामीमध्ये धेरै जनालाई थाहा छैन । ऋग्वैदिक आर्यहरुले य’ज्ञ गर्ने परम्पराका समय देवतासमक्ष ह’वन गरिएकाे सामग्री पुर्याउनका लागि अ”ग्निको प्रयोग आ’रम्भ गरे । तर, यज्ञ वेदीमा ह’वन गर्ने बेला ‘स्वा-हा’ शब्दको उच्चारण गरिन्थ्यो ।
वास्तवमा ‘स्वा-हा’को अर्थ आफैंमा धेरै रो’चक छ । देव आ’ह्वानका लागि मन्त्र पाठ गर्दै ‘स्वा-हा’ शब्दको उच्चारण गरेर निर्धारित ह’वन सामग्रीको भो’ग अ”ग्निको माध्यमबाट देवतासमक्ष पुर्याइन्छ । यो स्वा-हाको निर्धारित नैरुक्तिक अर्थ हो, ‘सही रीतिपूर्वक पुर्याउनु ।’
तर, के र कसलाई ? अर्थात आवश्यक भौगिक प’दार्थ उसको प्रिय समक्ष पुर्याउनु । हवन अनुष्ठानको यो अ’न्तिम र महत्वपूर्ण क्रि’या हो । कुनै पनि य’ज्ञ तबसम्म सफल मानिदैन, जबसम्म ह’वन गरिएको सामग्रीको ग्रहण देवताले गर्दैनन् । देवता यस्तो ग्रहण तब मात्रै गर्न सक्छन्, जब ‘स्वा-हा’ उच्चारण गरेर अ’ग्निमा अर्पण गरिन्छ ।
निश्चित रूपमा मंत्र विधान संरचनाको आरम्भमा नै यो तथ्यामा विचार गर्न शुरु भएको थियो कि आखिर ह’वन गरिएको सामग्री कसरी देवतासमक्ष पुर्याउने ? विविध उपारायद्वा कैयौं प्रयास या’ज्ञिक वि’धानलाई संचालित गर्न व्यक्त गरियो । अन्ततः अ’ग्निलाई माध्यमको रुपमा सर्वश्रेष्ठ पाइयो भने उपयुक्ततम शब्दको रुपमा ‘स्वाहा’को गठन भयो । एजेन्सी ।